Qaphela ekusetshenzisweni kwe-glassware yaselebhu, yini ongayinaki | Xipingzhe
UDing, ding, bang, wephule elinye, futhi leli elinye lamathuluzi ajwayelekile kakhulu ebhodini lethu, i-glassware. Uyihlanza kanjani i-glasswares nokuthi ungomisa kanjani.
Kunezinto eziningi okufanele uzinake ngesikhathi sokusebenzisa, uyazi?
Use wezingilazi ezivamile
1. Ukwahlukaniswa: Uphawu lwamapayipi olulodwa (olubizwa ngokuthi yi-big belly pipette), i-pipette ethweswe iziqu (uhlobo lokukhipha olungaphelele, uhlobo lokukhishwa oluphelele, uhlobo lokushaywa)
I-single mark pipette isetshenziselwa ukufaka i-pipette ivolumu ethile yesisombululo ngokunembile.Ububanzi bengxenye yokumaka ye-pipette emakwe yodwa incane futhi ukunemba kuphezulu; I-indexing pipette inobubanzi obukhulu futhi ukunemba kubi kakhulu. Ngakho-ke, lapho ulinganisa inani eliphelele lesisombululo, usayizi ohambisanayo uvame ukusetshenziswa i-single mark pipette esikhundleni se-indexing pipette.
Ukushaya amapayipi: ekuhlolweni okudinga ukunemba okuphezulu, sula amanzi asalayo kusukela ekugcineni kwepayipi ngephepha lokuhlunga, bese ugeza amanzi ngaphakathi nangaphandle kwethiphu yepayipi ngoketshezi olulindile kathathu ukuqinisekisa ukuthi ukuhlushwa Isisombululo esisebenzayo sisalokhu singashintshi.Qaphela ukuthi ungaphindi uxazulule ikhambi ukugwema ukungcoliswa nokungcoliswa kwesisombululo.
Lapho udonsa isixazululo okufanele ufiswe kuso, faka ithiphu le-tube 1-2cm ngaphansi kobuso obuketshezi (kujule kakhulu, isixazululo esiningi sinamathela odongeni lwangaphandle lweshubhu; ayijulile kakhulu: ukuncela okungenalutho ngemuva kokuwa kwezinga liketshezi).
Ukufunda: Umugqa wokubona usezingeni elifanayo nendawo ephansi kunazo zonke ye-meniscus yesisombululo.
Khulula: ichopho leshubhu lithinta ingaphakathi lomkhumbi ukuze umkhumbi utshekeke futhi ithubhu ime mpo.
Kwesokunxele ngaphandle kodonga: Ngaphambi kokuba kususwe ipayipi esitsheni esamukelayo, linda amasekhondi ama-3 ukuqinisekisa ukuthi uketshezi luphuma luphele ngokuphelele.
(2) ibhodlela levolumu
Isetshenziselwa ukulungiselela isixazululo sokuhlungwa okunembile.
Ngaphambi kokusebenzisa ama-volumetric flasks, hlola ukuthi ivolumu yamabhodlela we-volumetric iyahambisana yini nalokho okudingekayo; Amabhodlela ansundu kavolumetric kufanele asetshenziselwe ukulungiselela izinto ezinokuncibilika okulula. Ukuthi ipulaki lokugaya noma ipulaki lepulasitiki liyavuza yini amanzi.
1. Ukuhlolwa kokuvuza: engeza amanzi ompompi endaweni eseduze kolayini welebula, xhuma ukhokho ngokuqinile, cindezela ipulagi ngomunwe, ume ibhodlela ubhekise phansi imizuzu engu-2, bese usebenzisa iphepha lokuhlunga elomile ukuhlola ukuthi ngabe kukhona yini amanzi igebe lomlomo webhodlela.Uma kungekho ukuvuza kwamanzi, jikelezisa ukhokho ngo-180 ° bese ume ekhanda eminye imizuzu emi-2 ukubheka.
Izinduku zengilazi kufanele zisetshenziswe lapho kudluliswa izixazululo kumabhodlela wevolumu;
Musa ukubamba ibhodlela entendeni yesandla sakho ukugwema ukwanda ketshezi;
Lapho ivolumu esitsheni sevolumetric ifinyelela cishe ku-3/4, nyakazisa ibhodlela le-volumetric kaningana (ungaguquli), ukwenza isixazululo sixube kahle. Bese ubeka ibhodlela levolumu etafuleni bese ufaka amanzi kancane aze asondele kulayini ongu-1cm, ulinde imizuzu engu-1-2 ukushiya isixazululo sinamathele odongeni lwebhodlela. Faka amanzi endaweni ephansi kunazo zonke ngaphansi kwezinga loketshezi lokugoba kanye ne-tangent emaki;
Isixazululo esishisayo kufanele sipholiswe ekamelweni lokushisa ngaphambi kokuba sijojowe ebhodleleni levolumetric, ngaphandle kwalokho iphutha levolumu lingabangelwa.
Ibhodlela levolumu alikwazi ukubamba isixazululo isikhathi eside, ikakhulukazi i-lye, ezokonakalisa ingilazi futhi yenze induku kakhokho ingakwazi ukuvula;
Lapho ibhodlela levolumetric selisetshenzisiwe, ligeze ngamanzi.
Uma ingasetshenziswa isikhathi eside, yigeze bese uyisula bese uyayinamathisela ngephepha.
Ukuthi zonke izinhlobo ze-glassware ezisetshenziswe elabhoratri elihlanzekile namakhemikhali zihlanzekile ngokuvamile kuthinta ukuthembeka nokunemba kwemiphumela yokuhlaziya, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi i-glassware esetshenzisiwe ihlanzekile.
Kunezindlela eziningi zokugeza i-glassware, okufanele ikhethwe ngokuya ngezidingo zesivivinyo, ubunjalo benhlabathi nezinga lokungcola. Idivayisi yokulinganisa edinga ukukala isixazululo ngokunembile, akulula ukusebenzisa ibhulashi lapho uhlanza, ngoba ibhulashi lisetshenziswa isikhathi eside, kulula ukugqoka udonga lwangaphakathi lwensimbi yokulinganisa, nezinto okumele zenziwe ukukalwa akulona iqiniso.
Ukuhlolwa kokuhlanzeka kwengilazi: udonga lwangaphakathi kufanele lumanziswe ngokuphelele ngamanzi ngaphandle kobuhlalu.
(1) Shayela ngamanzi;
(2) Geza ngesisombululo noma isepha (le ndlela ayinconyelwe i-chromatography noma ucwaningo lwe-mass spectrometry, ama-surfactants akulula ukuwahlanza, okungathinta imiphumela yokuhlola);
(3) Sebenzisa i-chromium lotion (i-20g potassium dichromate ichitheka emanzini angama-40g afudunyeziwe futhi anyakaziswe, bese kuthi i-hydrogloric acid egxilwe ezimbonini i-360g yengezwe kancane): inamandla amakhulu okususa uwoyela ezintweni eziphilayo, kepha iyonakalisa kakhulu futhi ubuthi obuthile. Naka ukuphepha;
(4) Amanye amafutha;
I-alkaline potassium permanganate lotion: i-4g potassium permanganate ichitheka emanzini, i-10g ye-potassium hydroxide iyangezwa futhi ihlanjululwe ngamanzi iye ku-100ml. Isetshenziselwa ukuhlanza amabala kawoyela noma ezinye izinto eziphilayo.
I-oxalic acid lotion: 5-10g oxalic acid incibilika emanzini ayi-100ml, bese kufakwa inani elincane le-hydrochloric acid egxilile. Lesi sixazululo sisetshenziselwa ukugeza i-manganese dioxide ekhiqizwa ngemuva kokuwashwa kwe-potassium permanganate.
Iodine-potassium iodide lotion (1g iodine ne-2g potassium iodide incibilika emanzini bese ihlanjululwa ngamanzi iye ku-100ml): isetshenziselwa ukugeza ukungcola okusasele okumnyama okusansundu kwe-nitrate yesiliva.
Isixazululo se-pickling esimsulwa: 1: 1 i-hydrochloric acid noma i-nitric acid. Kusetshenziselwe ukususa ama-trace ions.
I-alkaline lotion: isisombululo esingu-10% se-sodium hydroxide aqueous. Umphumela wokunciphisa ngokushisa ungcono.
Ama-solvents we-Organic (i-ether, i-ethanol, i-benzene, i-acetone): asetshenziselwa ukugeza amabala kawoyela noma izinto eziphilayo ezichithwe ku-solvent.
I-glassware kufanele igezwe futhi yomiswe ukuze isetshenziswe kamuva ngemuva kokuhlolwa ngakunye. Ukuhlolwa okuhlukile kunezidingo ezahlukahlukene zezinga lokoma kwezinsimbi zengilazi. Isibonelo, ibhodlela elingunxantathu elisetshenziselwa ukufaka i-titrate acidity lingasetshenziswa ngemuva kokuwashwa, ngenkathi ibhodlela elingunxantathu elisetshenziselwa ukuzimisela kwamafutha lidinga ukomiswa. Insimbi kufanele yomiswe ngokuya ngezidingo ezihlukile.
(1) Ukushiswa komoya: uma ungayidingi ngokuphuthumayo, kungomiswa kubhekiswe phansi;
(2) Ukomisa: Kungomiswa kuhhavini ngo-105-120 ℃ (okokulinganisa akukwazi ukomiswa kuhhavini);
(3) Ukuqomisa umoya: umoya oshisayo ungasetshenziswa ukomisa ngokushesha (umshini wokomisa ingilazi).
Vele, uma ufuna indlela yokuhlanza neyokomisa ephephile nephumelelayo, ungakhetha futhi i-laboratory glassware washer ekhiqizwa yi-XPZ. Ayikwazi ukuqinisekisa kuphela umphumela wokuhlanza, kepha futhi yonga isikhathi, amandla, amanzi kanye nabasebenzi. I-laboratory glassware washer ekhiqizwa yi-XPZ isebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokuhlanza bamazwe omhlaba. Ingakwazi ukuqedela ukuhlanza okuzenzakalelayo, ukubulala amagciwane kanye nokomisa ngenkinobho eyodwa, ikulethele umuzwa omusha wokusebenza kahle, isivinini nokuphepha. Ukuhlanganiswa kokuhlanza nokomisa akugcini nje ngokuthuthukisa izinga nokusebenza kahle kwe-automation yokuhlola, kepha futhi kunciphisa kakhulu ukungcoliswa nokonakala ngesikhathi somsebenzi.